पार्टीबाट छुट्टिएकालाई रविन्द्र मिश्रको प्रेमपत्र: राजनीतिक प्रेम विवाह थियो तर डिभोर्स भयो ! – YesKathmandu.com
पार्टीबाट छुट्टिएकालाई रविन्द्र मिश्रको प्रेमपत्र: राजनीतिक प्रेम विवाह थियो तर डिभोर्स भयो !
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पार्टी विभाजन गरेर गएका साथीहरुलाई प्रेम पत्र लेखेका छन् । देश बनाउन देशभन्दा ठूलो मुटु चाहिने भन्दै छट्टिएर गएका उज्वल थापासहितका १६ केन्द्रीय सदस्यलाई प्रेम पत्र लेखेका हुन् । हामीबीच राजनीतिक प्रेम विवाह भएको थियो एक आपसमा चिनजान नै नगरी विवाह गरेका थियौ, धेरै लामो समय टिकेन तर एकअर्काबाट धेरै सिक्यौं’ प्रेम पत्रमा मिश्रले लेखेका छन् ।
मिश्रले लक्ष्य समानता भएरमात्र नपुग्ने बताउँदै लक्ष्यमा पुग्न विचार र ब्यवहार पनि समान हुनुपर्ने धारणा प्रेम पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लक्ष्यमा समानता भएरमात्र नपुग्ने रहेछ । लक्ष्यमा पुग्ने विचार र व्यवहारमा पनि समानता चाहिने रहेछ। दूर्भाग्यवश, लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रा वैचारिक चक्र र व्यवहारमा यति धेरै अन्तर रहेछन् कि हामीले जतिसुकै प्रयास गर्दा पनि ती एकवद्ध हुने संभावनै रहेनछ। त्यसैले तपाईंहरू अनायासै घर छोडेर जानुभयो’ मिश्रले पत्रमा लेखेका छन् ।
आम निर्वाचनपछिको एक वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अत्यन्तै प्रतिकूलता भएपनि आफुहरुले ठूलै उपलव्धि हासिल गरेको मिश्रले बताएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राखेर सञ्चार माध्यमका कयौं बहसहरू आफ्ना प्रतिनिधित्वबिना अपुरो देखिन गरेको बताएका छन् । आफ्ना सफलताको बर्णन गर्द मिश्रले राजनीतिक बहसहरूमा अबको विकल्प हामी नैं हौं भन्ने निष्कर्षहरु निकालिन थालेका बेला विभाजन भएको उनले बताएका छन् ।
‘सामाजिकरुपमा असल र भद्र देखिने हामीहरू समेत गलत निर्देशकहरुका कारण राजनीतिक मञ्चमा फरक पात्र बन्न सक्दा रहेछौं भन्ने अनुभूति भएको छ। हामी छुट्टीएको देखेर यहाँ रमाउनेहरु धेरै छन्। मन दुखाउनेहरु अझ धेरै छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, हामीबीच अभियानकेन्द्रीत समूह मात्र बन्ने की राष्ट्रिय राजनीतिमा सुसंस्कृत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर देश रूपान्तरण गर्ने पार्टी बनाउने भन्नेमा मतभेद थियो’ उनले लेखेका छन् ‘त्यो मतभेद छलफलबाट टुङ्गिन नसकिने तहको थिएन। तर तपाईंहरू जानुभयो र गएदेखि नै आरोपै आरोप लगाउनुभयो।’
पार्टी विभाजनपछि लगाइएका आरोपभन्दा बढि सामूहिक लक्ष्यमा पुग्ने सपनामा आघात परेको भन्दै उनले चिन्ता गरेका छन् । ‘हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण नहेरी मर्नु पर्ला भन्ने चिन्ता छ। पुष ३० गतेका लागि तय गरिएको हाम्रो भेटमा आत्मै पखालेर मनका पीडा पोखुँला भन्ने र दिनढाडै व्यक्तिगतरूमा मेरो र संगठनात्मकरूपमा पार्टीको ढाडमा हानिएको छुरीले पारेको घाउमा मल्हम लगाउँला भन्ने सोच थियो। तर अलि ढिलोसम्म पर्खिएछु, तपाईंहरू थाहै नदिइ हिँडि हाल्नुभयो’ उनले लेखेका छन् ।
दाहाल र अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता